सेल्फी कि स्वार्थीः कता मोडिदैछ समाज ? - बडिमालिका खबर
शनिबार, जेष्ठ २४, २०७७
सेल्फी कि स्वार्थीः कता मोडिदैछ समाज ?
शनिबार, साउन ४, २०७६
आँखा अघिल्तर दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटनाग्रस्त मान्छे छटपटाउँछ, चिच्याउँछ, सहयोगको याचना गर्छ । तर, यस्तो अवस्थामा सहयोगको हात बढाउनेहरु कति हुन्छन् ?
भर्खरै मात्र बाढी-पहिरोले धेरै जनधनको क्षति पुर्‍यायो । सामाजिक सञ्जालभरी पानीमा पीडा भोग्नेहरुको दृश्य देखिन्छ । एक किसानको भैंसी बगाइरहेको छ । ति बृद्ध किसान त्यत्तीका भेलमा पसेर भैंसी जोगाउने प्रयत्नमा छन् । कोही रमिते बनेर उक्त भिडियो आफ्नो मोवाइलमा कैद गरिहेका छन् ।
वाढीकै कारण एक ठाउँमा सागसब्जी बगाएको देखिन्छ । एकाध व्यापारी भेलमा बगेको सागसब्जी निकाल्ने प्रयासमा छन् । कसैको लागि यो दृश्य रोचक लाग्छ र भिडियोमा कैद गर्छ ।
यसैगरी वाढीपहिरोले विपत्ति निम्त्याइरहँदा कोही मृत्युसँग लडिरहेका छन् भने कोही त्यसलाई भिडियोमा कैद गरिहेका छन् ।
यस्तो विपतमा तपाईं भिडियो खिचेर बस्नुहुन्छ कि सहयोगको हात बढाउनुहुन्छ ?
हुनसक्छ, सहयोग गर्ने अवस्था नहोला । तपाईंको सामथ्र्यले सहयोग गर्न नभ्याउँला । यद्यपी केही न केही हिसाबले सान्तवना मिल्ने काम त गर्न सकिन्छ । अर्काको पीडालाई भिडियोमा खिचेर दुनियाभर फिजाउँदा हामीलाई के लाभ मिल्छ ?
के हामी चर्चित हुन्छौं ? हामीलाई पैसा आर्जन हुन्छ ? हामी बहादुर कहलिन्छौं ? जवाफ खोज्नुपर्छ ।
अहिले कुनै ठाउँमा दुर्घटना भयो भने त्यहाँ सेल्फी खिच्नेहरुको भिड लाग्छ । कोही छटपटाइरहेका हुन्छन्, मृत्युसँग जुधिरहेका हुन्छन्, असह्य पीडाले चिच्याइरहेका हुन्छन् । तर, उनको पीडालाई बेवास्ता गर्दै मान्छेहरु सेल्फी खिच्न हतारिन्छन् ।
केही महिनाअघि काठमाडौंको एक घरमा आगलागी भयो । आगलागी लगत्तै त्यहाँ भिडियो खिच्नेको ताँती लाग्यो । उक्त ताँतीलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न वरुण यन्त्र (दमकल)लाई हम्मे परेको थियो ।
अहिले मान्छेलाई अरुको विपत्ती रमिता लाग्न थालेको । कोही आपत-विपत्तिमा परेका छन् भने त्यहाँ ठूलो भिड जम्मा हुन्छ । त्यतिका भिडमा एकाध मात्र यस्ता हुन्छन्, जो सहयोगका भावनाले पुगको हुन्छन् । बाँकी भिडियो वा सेल्फी खिच्न थाल्छन् । उनीहरुलाई त्यस्तो दर्दानक, पीडादायी वा कारुणिक दृश्य/भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्ने हतारो हुन्छ ।
यस किसिमको प्रवृत्तिले देखाउँछ, हामीले मानविय संवेदना गुमाउँदै गएका छौं । हामीलाई अरुको चोटले दुख्न छाडेको छ । हामीलाई अरुको पीडाले दुख्न छाडेको छ । हामीलाई अरुको विपत्तिले अत्याउन छाडेको छ । अरुको पीडा हाम्रो लागि रमिता भएको छ । हामी रमिते बन्दैछौं । सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगले यस्तो प्रवृत्तिलाई अरु मलजल गरिरहेको छ ।
एक दरिद्र मान्छे सडकमा बिलौना गरिरहेका छन् । उनलाई खानपिन गराउनका साटो मान्छेहरु भिडियो खिच्न तयार हुन्छन् । टोलमा लोग्ने-स्वास्नीको झगडा पर्छ । मान्छेहरुलाई झगडा छुट्याउन भन्दा भिडियो खिच्न हतारो हुन्छ । कोही सडक दुर्घटनामा परेर छटपटाउन थाल्छन् । मान्छेहरु उनको उद्वार गर्न छाडेर त्यो छटपटीको भिडियो खिच्न थाल्छन् ।
यसरी कैद गरिएको भिडियो, फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्छन् । मान्छेहरु अहिले कस्तो मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुँदैछन् । अरुको पीडा, गरिबी, दुःख, दरिद्रता, वाध्यतालाई सार्वजनिक गरेर मान्छेहरु कस्तो खुसी खोजिरहेका छन् ? कस्तो ख्याती खोजिरहेका छन् ?
हाम्रो जीवन एकनास रहँदैन । भोलि हामीलाई पनि आपत विपत आइलाग्छ । यस्तो बेला तपाईं भेलमा बग्दै गरेको भिडियो कसैले फेसबुकमा राखिदियो भने ? तपाईंको घर आगोले दनदनी जल्दै गरेको फेसबुकमा राखिदियो भने ? तपाईं चोटग्रस्त अवस्थामा छटपटाइरहेको दृश्य फेसबुकमा राखिदियो भने ?
सोचौं, अरुलाई पर्ने विपत्ति हामीलाई पनि पर्न सक्छ । अरुको फोटो, भिडियो जसरी हामी सामाजिक सञ्जालमा राखिदिन्छौं, अरुले हाम्रो पनि राखिदिन सक्छ ।
मानविय मूल्य र मान्यतालाई भुलेर अर्काको पीडाको सौदाबाजी कहिलेसम्म गरौंला ?
पहल कार्यक्रम काे औपचारिक समापन
नेकपा समर्थक कर्मचारीबिरुद्ध नेबिसघकाे ज्ञापन पत्र
बाजुराका सबै स्थानीय तहहरुले कृषिमा विशेष लगानी गर्नुपर्छ नागरीक अगुवा जैशी ( भिडियो सहित)
केन्द्र र प्रदेश सरकारले राम्रो सहयोग गरेको छ : नगरप्रमुख रावल (भिडियो सहित)
दैनिक चुलोमा प्रयोग हुने मसलाको म्याद गुर्जेको पाइयो
स्थानीय उत्पादन नै गाउँपालिकाबाट राहत दिइराखेका छाैँ : उपाअध्यक्ष थापा (भिडीयाे सहित )
बाजुराका स्थानीय तहले मापदण्ड बिपरीत राहत बितरण गरे नेकपा नेता तथा प्रचार बिभाग प्रमुख खड्का(भिडियाे सहित)
कोरोना लकडाउनले डेटिङ र यौन सम्बन्धलाई कसरी र कति परिवर्तन गर्दैछ ?
अहिले अपनाइएको ६ फिटको ‘सामाजिक दूरी’ कत्तिको सुरक्षित छ ?
महिला, बालबालिकाभन्दा पुरुषलाई कोरोनाको खतरा बढी
डा. निकिता ढकालको सल्लाहः गर्भ नबस्ने समस्यालाई यसरी निराकण गर्न सकिन्छ
पुरुषका यी पाँच कुराबाट टाढा भाग्छन् महिला
श्रीमती सात प्रकारका हुन्छन्, तपाईंको श्रीमती कुन वर्गकी ?
फोन गर्न घाम पर्खनुपर्ने!
बैतडी जिल्ला अस्पतालका १९ स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टिनमा
प्रयोगशालाले धान्न नसकेपछि कोरोना परीक्षणमा कडाइ, विज्ञ भन्छन्- संकट आउन सक्छ
मलामी खोज्दै स्वास्थ्य कार्यालय
सुदूरपश्चिममा जनप्रतिनिधिलाई पनि देखियो कोरोना
कोरोनाभाइरसबाट थप २ जनाको मृत्यु
थप ३२३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३६५ जनाले जिते कोरोना
डोल्पामा कोरोनाबाट एक जनाको मृत्यु
सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने चटारो
धनगढी बाट आएकी गाँउपालिकाकि उपाअध्यक्ष कुन्ति साउद बुढा क्वारेनटाइनमा
बाजुराको क्वारेन्टाइनमा एक जनाको मृत्यु
फ्रिज भरिएपछि सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रोकियो स्वाब संकलन
बाजुराका युवाले बृक्षारोपण गरेर मनाए बिश्व वातारण दिवस